စပိန်နိုင်ငံမှာ စေတီတွေ တည်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို စတင်ကိုးကွယ်လို့နေကြပြီ….
By Uptodate MMPosted on June 16, 2019
စပိန်နိုင်ငံမှာ စေတီတွေ တည်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို စတင်ကိုးကွယ်လို့နေကြပြီ…. စပိန်နိုင်ငံမှာ စေတီတွေ တည်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို စတင်ကိုးကွယ် နေကြပြီဖတ်ကြည့်နော်… ပညာတွေတတ်ပြီးအကောင်း အဆိုးကို မခွဲခြားနိုင်ရင်အလကားပဲ၊ ငွေကြေးချမ်းသာပြီး အတ္တတွေကြီးကာကိုယ့်အိတ်ထဲပဲ ထည့်ဖို့ ကြိုးစားနေရင်လည်းအလကားပါပဲ။ အတွေးအခေါ် ဘယ်လောက်မြင့်မြင့်စာနာနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ […]
ဆေးစာကို ပဲပင်ပေါက်လက်ရေးဖြင့်ရေးသဖြင့် ဆရာဝန်သုံးဦး ဒဏ်ငွေချမှတ်ခံရ
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ တရားရုံးတစ်ရုံးက ဆရာဝန်သုံးဦးကို ဒဏ်ငွေ ၆၈ ဒေါ်လာစီ ချမှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်များ၏လက်ရေးဆိုးလွန်းလှသဖြင့် လူနာများ ထိ ခိုက်ရသဖြင့် ထိုထိခိုက်မှုမှတ်တမ်းကို ကြည့်ကာ တရားရုံးက ဆရာဝန်များကို ဆင့်ခေါ်ကာ ပြစ်မှုကိုကြားနာပြီး အမိန့်ချ မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်နောင် […]
ဖေဘုတ် အကောင့်အတုပေါင်း သန်းသုံးထောင်ကိုခြောက်လအတွင်း ရှင်းလင်းမည်
ဖေဘုတ် အကောင့်အတုပေါင်း သန်းသုံးထောင်ကိုခြောက်လအတွင်း ရှင်းလင်းမည် တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ဖေဘုတ် အကောင့်အတုပေါင်း သန်းသုံးထောင်ကိုခြောက်လအတွင်း ၇ှင်းလင်းမယ်လို့အမေရိကန် အခြေစိုက် ဖေ့ဘုတ် ဌာနချုပ် က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မူရင်း ပုံနဲ့ မတင်တဲ့သူတွေ […]
By Uptodate MMPosted on May 24, 2019 May 24, 2019
မယားကိုသစ်​ပင်​မှာတွဲလောင်​ချည်​ပြီးတော့.ယောကျာ်းနဲ့ အဖော် တစ်ဦး က ရက်စက်ခဲ့တဲ့ အမှု ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း နောင်ဘိုလမ်းဖူးခရိုင်ထဲမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဇနီးကို လက်နှစ်ဖက်ကြိုးတုပ် သစ်ပင်မှာ တွဲလွဲချည်ပြီး မီးခိုးငွေ့တွေနဲ့ မှိုင်းတိုက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို Ai […]
မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို တရုတ်က နာရီပိုင်းအကြာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီး တစ်ဦးကို ရိုက်နှက်စစ်ဆေး
By Uptodate MMPosted on May 20, 2019
ကျယ်ဂေါင်မှ မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို တရုတ်က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီး ရိုက်နှက်စစ်ဆေး(ရုပ်သံ) ကျယ်ဂေါင်မှ မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို တရုတ်က နာရီပိုင်းအကြာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီး တစ်ဦးကို ရိုက်နှက်စစ်ဆေး မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် ဂိတ်မြန်မာဘက်ခြမ်းတွင် ကား ဖြင့်ပိတ်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအတွက် ကျယ်ဂေါင်၌နေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို တရုတ် […]
နာမည်ကြီးနေတဲ့ သစ်တောတွင်းမှ ကျောင်းဆရာမနဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦး ရုပ်သံ
နာမည်ကြီးနေတဲ့ သစ်တောတွင်းမှ ကျောင်းဆရာမနဲ့ သူမအဖေါ်အမျိုးသားတစ်ဦး ရုပ်သံ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆိုရှယ် မီဒီယာမှာ နံမည်ကြီးနေတဲ့ ရုပ်သံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကန်ချနဘူရီခရိုင် ထုန်ရိုင် နလေစွမ် သဘာဝ သစ်တော တွင်းမှာ ကျားတစ်ကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေခဲ့တဲ့ […]
By Uptodate MMPosted on May 12, 2019
ဒီပို့လေးက ယမန်နေ့က တင်ခဲ့တဲ့ပို့လေးပါ..။ တစ်ချို့လူတွေက ပုံပဲပါတာဆိုတော့ သိပ်ယုံကြလို့ အခု ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်လာလို့ ပြန်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကလေးအမေတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် တစ်သက်တာလုံး ရင်ကျိုးရမယ့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို သင်ခန်းစာအနေနဲ့ မိခင်တိုင်း သတိရှိကြစေချင်ပါသည်။ မိခင် အွန်လိုင်းသုံးနေတုန်း […]
By Uptodate MMPosted on April 20, 2019 April 20, 2019
၂၀၁၅ ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံ ဖတ်ထလုံး ခရိုင်အတွင်းရှိနေအိမ်တအိမ်က နေရာမျိုးစုံမှာ မီးအကြိမ် ၁၀၀ကျော် သူဘာသူ ထလောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ပြီး မြို့ နယ် အာဏာပိုင်တွေ ပရောဂ ဘိုးတော် ဆရာတွေ ကပါ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်ရပ်မှန် […]